नेपाल आज | बलात्कार आरोपी सिद्धबाबालाई उच्च अदालतले सफाइ दिन मानेन
मङ्गलबार, ०३ जेठ २०७९ गते प्रकाशित - नेपाल आज
बलात्कार आरोपी सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसला उच्च अदालत विराटनगरले उल्टाएको छ।
उच्च अदालत विराटनगरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले मंगलवार जिल्लाको आदेश उल्टाएको हो । उच्च अदालतले जिल्लामा पेश भएका प्रमाणहरु पुनः बुझेर फैसला गर्न जिल्लालाई आदेश दिएको छ।
इजलासले पीडित र पीडक पक्षबीच भएको भ्वाइस कलको परीक्षण गर्न, पीडित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकको बकपत्र गर्न र पीडित र पीडक पक्षको बकपत्र तथा प्रमाणहरु बुझेर पुनः इन्साफ गर्ने फैसला गरेको छ।
उल्टिएको छ। महिला अनुयायीलाई बलात्कार गरेको मुद्दामा सिद्धबाबाले सफाई नपाउने भएका छन् ।
०७७ मंसिर २२ गते जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले रामकृष्णचार्य श्री वैष्णव कृष्णदास अर्थात कृष्णवहादुर गिरीलाई सफाइ दिएको थियो । महिला अनुयायीले ०७६ मंसिर ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा गिरी विरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरीमा ०७६ कात्तिक ४ गते राति सिद्धबाबाले करणी गरेको दाबी गरिएको छ। सोही जाहेरीका आधारमा पक्राउ परेका गरीले हिरासतको अवधि विराट नर्सिङ होममा बसेर बिताएका थिए ।
फिर्ता भएन बलात्कार आरोपी सिद्धबाबाको व्रम्हचार्य !
सिद्धबाबाको ब्रम्हचर्य तोडिदिएको मुद्दामा आज फैसला !
सहमति करणी पनि नगरेको भन्दै उच्च अदालत पुगे सिद्धबाबा
बलात्कार आरोपी सिद्धबाबाले सफाई पाए
गठवन्धनमा भित्रभित्रै सिगौंरीः पुरा हुन्छ त ओलीको ‘असार १७’ को भविष्यवाणी ?
नेपाल आईपुगे भारतीय राजदुत श्रीवास्तव
नेकपा एसमा यसरी चर्किदैछ माधव नेपाल र प्रेम आलेको शक्ति संघर्ष
ससः त्वाः रेन्टुरेन्टः ज्वाईलाई ससुराली बोलाएर ठगी गर्ने धन्दा
एक्सन !, कट् ! : नेकपा एसका १० मध्ये ६ सांसदले फिर्ता लिए हस्ताक्षर